Bishal May 23, 2022 भिडियो 0
ललितपुर साना गाउँबाट अध्ययनका लागि अष्ट्रेलियाको सिड्नी आएकी रमिला मर्हजनको मृ’त्यु भएको छ । उनी दुई वर्षअघि अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया आएकी हुन् । ब्रे’न ट्यु’म’रको स’मस्या देखिएर त्यसको उपचारका क्रममा उनको मृ’त्यु भएको बताइएको छ। श्रीमान सञ्जय महर्जन पनि उनीसँगै थिए। रमिलाको दा’हसंस्कार अष्ट्रेलियामै गरिएको छ। २ वर्षअघि मात्रै उनको विवाह भएको थियो। रमिला
पिडित श्रीमानश्रीमती फरार श्रीमानश्रीमतीको खोजी गर्दै मिडियामा(भिडियो हेर्नुस)
Bishal May 22, 2022 भिडियो 0
पछिल्लो समय बिबाह गरेका महिला अर्कै पुरुषसँग भा”ग्ने र बिबाहित पुरुषले अर्कै महिलालाई भ”गा”ए”र बिबाह गर्ने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो समय यस्ता घटनाहरु बढ्दा छ्न र यी बिषयहरु सामाजिक बि”कृ”ती नै बन्दै गएका छ्न । आजको घटना पनि यस्तै प्रकृतिको रहेको छ । दुई पि”डि”त श्रीमानश्रीमती जो आफ्ना फ”रा”र श्रीमती र
लामो समयपछि मिडियामा आएका बिक्रम मनु फेरी बने भाबुक,बिक्रमको स्वास्थ्यमा आएन सुधार(हेर्नुस् भिडियाे
भनिन्छ प्रेम अनि माया जस्तो पबित्र कुरा अरु केही हुदैन यो संसारमा । मनु बिक्रमको नि’स्वा’र्थ मायालाइ देखेर भने यो कुरामा तपाईलाइ पुरै बिस्वास ला’ग्नेछ । मनु बिक्रम एक समय सामाजिक सन्जालमा भाईरल भएको जोडी पनि हो । र अझै पनि उनिहरुको माया उदा’हरणिय नै छ । श्रीमानले रोग र पीडाले ग्र’स्त छन
क ठै ! ३ जना मिलेर एक महिलामाथी मर्ने गरि कु’टपि’ट गरेकाे भिडियाे भाइरल ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )
सल्यानकाे कुमाख गाउँपालिका वडा नम्बर २ स्वीकाेट नेटामा एक महिलालाइ ३ जना मिलेर कु’टपिट गरेका छन् । पुस १७ गते नेटाबजारमा किराना पसल गर्ने डम्बरी बुढाथाेकीलाइ छिमेकी सम्झना बुढाथाेकी, उनका श्रीमान भीम प्रकाश वलि र बहिनी सबिना बुढाथोकीले कु’टपिट गरेका थिए । जुन भिडियाे अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएकाे छ । यी दुइ
सञ्जिताको परिवार काठमाडौं आएपछी ए’क्सा’सी के भयो सन्दिपलाई? कोठामा पुग्दा च’ल्यो रु’वा’बा’सी(हेर्नुस् भिडियो )
कतिले भन्छन् यसले मुखले मात्र भन्छिन् आफ्नो श्रीमान लाइ केही गर्दिनँ तर देखने छिमेकीलाई मात्र था छ कति सम्म श्रीमानलाई गरेको छु भन्ने भन्दै भक्कानिन्छिन्। श्रीमान स्वयममलाई था छ मैले कति गरेको छु भन्छिन्। ग्रीन सिटी हस्पिटल ले सबै कुरा निःशुल्क गर्दिने भएपछि उहाँले यो ग्रीन सिटी हस्पिटल लाई धन्यबाद दिएकी छिन्। उनलाई
केटाकेटाले नै गरे बि’बाह, हि’जडा, छ’क्का भन्ने लाई मुख भरी जबाफ’ से’क्सको यसरी हुन्छ (हेर्नुस् भिडियो )
उमेर पुगेका एउटा पु’रुष अनि एक महि’लाबिच आपसी समझदारीमा सगै जीवन बिताउने बाचा गरि गरिने एक पबित्र ब’न्धनलाई नेपाली समाजमा बिबाह भनिन्छ । तर आज एउटा यस्तो घटना घटेको छ जसले बिबाहको परि’भाषालाइ नै बदल’दिएको छ । बहिरि देशमा यस्ता घटनाहरु कहि’कतै हुनेगरेको पाइए’तापनी हाम्रो देशमा भने यस्ता घटना एकदमै कम देख्न
काठमाडौँ — गायक राजु लामाले सगरमाथा क्षेत्रमा ६ हजार पाँच सय ७४ मिटरको उचाइमा एकल कन्सर्ट गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरबारे सन्देश दिन गायक लामाले सगरमाथाको क्याम्प—३ मा पुगेर गीत गाएका हुन् । उनको यो कन्सर्ट सबैभन्दा उचाइमा गरिएको सांगीतिक कार्यक्रम बनेको छ । राजुले आफ्नो सार्वजनिक नै नभएको हिमालले डाक्यो मलाई
Bishal May 21, 2022 भिडियो 0
आज भोली सामाजिक सञ्जालमा युवाञयुवतीहरुको क्रेज बढ्दो छ । युवा युवती हरु मात्र होइन उमेर ढल्की सकेका हरु पनि सामाजिक सञ्जालमा समय बिताउन थालेका छन् । आफ्ना दैनिक जीवनमा भएका हुने गरेका घट्रना तथा विचार पोख्ने गतिलो माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । पछिल्लो समय टिक टक युवाहरु माझ लोकञप्रिय बनेको छ
टिकटकमा खुबै रुचाएकी एकदमै सुन्दर सशस्त्र प्रहरी महिला…(हेर्नुस् भिडियाे सहित )
विगत केही वर्षअघि देखि निकै नै नेपालीहरुबिच सामाजिक संजाल टिकटक निकै नै लोकप्रिय छ । यहांं सबै मानिसहरुले आफ्नो प्रतिभा पस्कने गरेका छ । कति मानिसहरु यहाबाट निकै नै भाइरल बनेका छन । त्यस्तै कयौ म्युजिक भिडियोहरु पनि यहि टिकटकबाट नै भाइरल हुने गरेका छन । त्यस्तै अहिले पछिलो समयमामा धेरै मानिसहरु त्यस्तै अहिले
‘धोकेबाजको राज्य’मा शिल्पा पोखरेलकाे धमाकेदार ‘इन्ट्री’ (भिडियो सहित)
admin May 21, 2022 भिडियो, मनोरञ्जन, समाचार 0
काठमाडौं । सुनिल बिसीको नयाँ आधुनिक गीत ‘धोकेबाजको राज्य’ सार्वजनिक भएको छ । प्रमोद खरेलको स्वर रहेको गीतमा लय तथा शब्दसंगित सुनिल बिसीको रहेको छ । सुनील बिसीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको गीतमा शिल्पा पोखरेल, अभी लामाको अभिनय रहेको छ । क्रान्ती केसीले निर्देशन गरेको गीतको म्युजिक भिडियो ब्रान्डरुट इन्टरटेनमेन्टले बजारमा